Gbakwụnye Programụ Bitcoin - Nweta Bitcoin na Azụmaahịa ọ bụla | Paxful
Nata Okwụkwụụgwọ maka ị kpọtara Ndi mmadu na Paxful
Mgbakwunye Programụ Bitcoin ga enyere gị aka inweta nnwere onwe ego na obodo gị. Ma dika onyinye, i ga na eweta ego mgbe obula.
Buru onye Mgbakwụnye Buru onye Mgbakwụnye
Ego nweta ozugbo na Azụmaahịa ọ Bụla
I ga enweta ego oge ọ bụla ndị ị ewebatara na Paxful, na ndị ha na akpọrọ , zụta Bitcoin.
Nweta 50% Ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa Nweta 50% Ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa
Mgbe ndi ị kpọtara zuta Bitcoin na Paxful
Nweta 10% Ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa Nweta 10% Ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa
Mgbe ndị enyi gị kpọrọ zụta Bitcoin na Paxful.
Gini mere iji buru onye Gbakwunye?
Gbakwụnye Programụ Bitcoin nke anyi bụ nnukwu ụzọ maka gị iji gbasaa okwu crypto n'obodo gị.
Nweta Bitcoin Nweta Bitcoin
I ga enweta 50% na ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa mgbe ọ bụla otu n'ime gbakwunye gi zụta Bitcoin.
Too Netwọk Gi Too Netwọk Gi
I ga enweta 10% nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa oge ọ bụla mmadụ sitere na netwọkụ gbatịrị azụ gị zụta Bitcoin.
Were ego Mgbe ọ Bụla Were ego Mgbe ọ Bụla
Ozugbo i nwetara Bitcoin opekata mpe 10 USD, ị nwere ike wepụta ego ị na enweta n’ime akpa ego Paxful gị oge ọ bụla ịchọrọ.
Ọ mara mma dị mfe, n'ezie-bụrụ Gbakwụnye Bitcoin na ụsoro atọ ngwa ngwa.
Kpota Onye ọbụla Kpota Onye ọbụla
Kekọrịta koodu Mgbakwunye gị ma ọ bụ njikọ na mgbasa ozi mmekọrịta, nzukọ crypto, ma ọ bụ obodo. Nwere ike ịchọta koodu gị pụrụ iche ma ọ bụ njikọ n'okpuru Mgbakwunye Dashbọọdụ gị (web) ma ọ bụ taabụ mgbakwunye (mobile).
Mee ka Ha Zu ahia Mee ka Ha Zu ahia
Kụziere ndị gbakwunye gị gbasara crypto na otu esi azụ ahịa na Paxful. Oge ọ bụla ha zụrụ Bitcoin, ị ga enweta 50% nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa ha. Also na-emekwa 10% nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa oge ọ bụla otu n'ime ndị gbakwunye ha zụtara Bitcoin na Paxful.
Nweta ikwụ ụgwọ Nweta ikwụ ụgwọ
Sochie ọrụ gbakwunye gị site na Mgbakwunye Dashbọọdụ gị ma lelee ego ị na enweta na akpaghị aka. Ozugbo ego gị ritere uru ma ọ dịkarịa ala 10 USD, ịnwere ike ị nweta ego na akpa ego Paxful gị.
Uda na atọ ụtọ ziri ezi? Uda na atọ ụtọ ziri ezi? Ka Anyị Mee ka i Bido!
Mepụta akaụntụ efu gị na Paxful ma bido ịkpọ ndị mmadụ òkù.
Soro Anyi Taa Soro Anyi Taa
Ị nwere ike ị nwe ajụjụ ole na ole n'uche gị. N'okpuru ebe a, anyị azawo ụfọdụ n'ime ndị ama ama.
Paxful bụ ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ na enyere gị aka ịzụta na ire crypto site na iji ihe karịrị nhọrọ ọkwụkwụụgwọ 300. Ọ dị ka eBay, mana maka ego - na kpam kpam na-enweghị njedebe. Anyị nwere ndị ọrụ karịrị nde 4.8 sitere n'akụkụ ụwa niile. A na echekwa azụmaahịa niile na Paxful site na ọrụ ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị, nke pụtara na ị nwere ike ịmekọrịta azụmahịa n'enweghị nsogbu ebe ị maara na echedoro ego gị.
Ebee ka m ga ele ụgwọ ọrụ mgbakwunye m?
Nwere ike ịlele ụgwọ ọrụ gi na ma mgbakwunye na dashbọọdụ òreè.
Enwere m ike ịmepụta njikọ mgbakwunye ọdịnala maka ebumnuche nsuso?
Eeh. Na dashboard Mgbakwunye gị, ị nwere ike ịmepụta njikọ pụrụ iche n'okpuru ngalaba ID Ịzụ ahịa, iji kesaa ndị na ndi ị kpọtara na cryptocurrency.
Kedu ihe anaghị ekwe?
Iji jide n’aka na anyị niile nọ n’otu peeji nke ihe enyere ma nke na abụghị, anyị edepụtarala n’okpuru ụfọdụ omume ka ị zere dịka Gbakwụnyere.
Ị mepụta ọtụtụ akaụntụ - a na ahapụ gị naanị otu na Paxful.
Iji ntughari (ebugharị) si na weebụsaịtị gị ruo na weebụsaịtị Paxful.
Itinye aka na aghụghọ iji nweta ndi gbakwunyere.
Ị na zụta mgbasa ozi maka ajụjụ ndị ama ama, dịka: Paxful, paxful.com, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na - emepụta - gụnyere nsụgharị ederede.
Iji njiri mara aha nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-asọmpi maka ịkpọsa akara Paxful - na-atụle Paxful na ụdị ndị ọzọ, na egosi ha n'ọnọdụ ọjọọ.
Na ekwusara ozi ụgha iji dọtakwuo ndị ahịa, ma ọ bụ na eduhie ndị ahịa n'ụzọ ọ bụla.
Igba ugwo n’elu ego ọrụ mgbakwunye gị na Paxful.
Choro ịmatakwu ọzọ? Lelee Iwu nke Ọrụ nke Gbakwụnye Programụ.
Gini bu Programụ Gbakwụnye Nke Paxful, ma kedu ka osi arụ ọrụ?
Programụ Gbakwụnye Nke Paxful bụ ihe na akpali ohere ka akwụghachi gi ụgwọ ọrụ maka ịkekọrịta Paxful na onye obula nọ gị okirikiri. Ọ dị ezigbo mfe n'ezie-ị na eweta ndị mmadụ na Paxful, ma na enweta oke nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa oge ọ bụla ha zụta crypto na Paxful. Ị ga enweta 50% nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa* maka ndị ị na eweta na Paxful, yana 10% nke ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa * maka ndị ha na eweta na Paxful. Ma nke a abụghị otu oge, mana oge ọ bụla ha zụta crypto na Paxful. Nwere ike ịmepụta netwọk I kpọta mmadụ na cryptocurrency gị nke ọma mgbe ị gosipụtara njikọ gbakwunye nke Paxful gị na ọdịnaya ị na ewepụta, kesaa ya na mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ kpọsaa ya na weebụsaịtị gị
Kedu nhazi ego a ga akwụ maka ọkwa ọ bụla nke programụ ahụ?
A gaakwụ gị ụgwọ oge ọ bụla otu n’ime ndị gbakwunye gị, ma ọ bụ mgbe ndị gbakwunye ha rụchara azụmaahịa na Paxful. A ga agbakọ ego ị ga enweta dabere na ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị di mma, nke bụ 1% nke ego erere, belụsọ mgbe ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa erughị 1%. Ọ bụrụ na ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa dị ala karịa 1%, a ga agbakọ ugwo mgbakwunye maka ihe ọ bụla ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa dị ugbu a. Ọdịdị okwukwugwo dị ka ndị a: Okwa 1: I ga anata 50% nke ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa ọkọlọtọ mgbe onye ọrụ zụta crypto nke oma. Okwa 2: I ga anata 10% nke ugwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa ọkọlọtọ mgbe onye ọrụ zụta crypto nke oma.
Kedu ọdịnaya na mgbasa ozi bụ ụzọ kachasị mma iji dọta ndi ahia na njikọ mgbakwunye m?
E nwere ọtụtụ isi mmalite dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ maka uru gị, gụnyere blọọgu gị, weebụsaịtị gị, Google AdWords, Yandex Direct, Yahoo / Bing ads, mobile ad networks,YouTube na isi ihe ntụrụndụ na platfọmu isi ego. Mgbasa ozi bụkwa ngwá ọrụ dị ukwuu iji nyere gị aka irite Bitcoin maka ndị na ezo aka. Ọ bụ ezigbo echiche iji IDs ịzụ ahịa gị maka ọkwa niile ị na eme, yabụ ị ga ahụ ihe ga akacha baara gị uru ma mụta ihe na ya.
Ugboro ole ka a na emelite ọnụ ọgụgụ gbakwụnye dashbọọdụ m?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ na emelite na kwa mgbe na gbakwụnye dashbọọdụ gị. Yabụ ihe ọ bụla ị hụrụ na dashbọọdụ kwesịrị ịgwa gị ebe ihe dị ugbu a.
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị mmekọ m ji eme ọtụtụ azụmaahịa , ebe ndị ọzọ debanyere aha na emeghị otu azụmahịa?
Ndị mmadụ nwere mkpa dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike ịchọ ịzụrụ Bitcoin mbụ ha na Paxful ma jide ya ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ, ebe ndị ọzọ ga anọgide na eji ikpo okwu ịzụta ma ọ bụ ree karịa. Omume ọrụ nke ndị mgbakwunye gị nwekwara ike ịdabere na ọdịnaya ị mepụtara iji zoo ha na onye ị na-elekwasị anya.
Kedu mgbe a ga akwụ mu ụgwọ?
Ego ị na enweta site na ndị mgbakwunye cryptocurrency gi na abanye na akpa ego gbakwunye gị ozugbo ndị mgbakwunye gị mezuru azụmaahịa ahụ. Ozugbo ị nakọtara USD 10 uru nke mgbakwunye Bitcoin, ịnwere ike ịkwaga ha na akpa ego Paxful gị oge ọ bụla ịchọrọ. Ozugbo ị nwetara 300 USD nke Bitcoin, anyị ga achọ ka ị mezue njirimara na nchọpụtaeziokwu adreesị. Ndụmọdụ: Ị nwere ike ree ego Bitcoin gị n’elu platfọmu anyị ka ị nweta uru ọzọ!
Ebee ka m nwere ike ịhụ njikọ gbakwunyere m?
Ị nwere ike ịchọta njikọ gbakwunyere gị na gbakwụnye dashbọọdụ na nke òreè gị.
Ebee ka m ga elele omenala ID ịzụ ahia m?
N'ọdịnihu dị nso, ị ga enwe ike ịlele IDs ịzụ ahịa gị ozugbo na dashboard gị. Nọrọ na ekiri!
Kedu mba ndị m ga eleba anya mgbe m na achọ ndị nga à kpọta?
Paxful bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma nwee ike iji ya mee ihe ọ bụla na ịntanetị. Yabụ n'ahịa ka ịchọrọ ịzụ ahịa bụ nke gị, mpaghara, mba ma ọ bụ nke ọzọ. Ugbu a, ọtụtụ ndị ọrụ anyị sitere na U.S., ebe Africa, Asia, na Latin America bụ ahịa anyị na eto ngwa ngwa.
Ọnọdụ ole di na Mgbakwunye Programụ Nke Paxful, ma kedu ka ha si arụ ọrụ?
A na ejedebe gị ikpata Bitcoin maka ndi mgbakwunye naanị site na mgbakwunye gi kpọmkwem. Kama nke ahụ, e nwere ogo abụọ na Programụ Gbakwụnye Nke Paxful - otu ziri ezi, na otu ezighi ezi: Ọnọdụ 1: Ndi a bu gbakwunye ndi debanyere aha kpọmkwem site na eji njiko gi. Ọkwa 2: Ndị a bụ ndị mmekọ ndị debanyere aha site na njikọ nke otu n'ime ndị gbakwunye gị.
Ọ bụrụ na mgbakwunye m na azụ ahịa na mgbakwunye ọzọ, a ka m ga na e nweta ego ọrụ zuru oké?
Ọ bụrụ na ndị mgbakwunye gị abụọ na azụ ahịa na ibe ha, mgbe ahụ ị ga enweta 25% ngụkọta ego niile na azụmaahịa ahụ karịa 50% na emebu.
Otu onye m tụrụ aro Paxful ka, debara aha na ejighị njikọ m. Enwere m ike ịnweta onyinye?
O di nwute, mba. Ụgwọ ọrụ Mgbakwunye ga ekwe omume site n'aka ndị ọrụ debanyere aha site na njikọ mgbakwunye gị pụrụ iche.
Enwere m ọwa mgbasa ozi mmekọrịta metụtara bitcoin, ụmụazụ m nwere mmasị ịzụta ma ọ bụ ire bitcoin. Ekwesịrị m ịkwado Paxful dị ka otu ụzọ isi mee nke a?
Kpamkpam! Paxful bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe n'ụwa maka onye ọ bụla, ebe ọ bụla ịzụta ma ọ bụ ree Bitcoin. Ndị na ezo aka na cryptocurrency gị nwere ike ịdebanye aha site na iji njikọ gị wee bido ịzụ ma ọ bụ ire Bitcoin n'ime nkeji! Oge ọ bụla ha zụrụ na Paxful, ị na enweta ego mgbakwunye.